USINDISWE EMALANGABINI | Scrolla Izindaba
Imoto yakhe yavutha amalangabi kwezinye zezingozi ezinkulu emlandweni we-F1.
Kodwa uRomain Grosjean usindile engozini enyantisayo eyenzeke e-Bahrain GP ngeSonto.
Owokuqala endaweni yesehlakalo kwakungumshayeli wemoto yezokwelapha waseNingizimu Afrika, uAlan van der Merwe.
Ngenxa yosizo olusheshayo, uGrosjean ushe izandla nezinyawo kuphela, nokulimala ezimbanjweni zakhe.
Umthombo wevidiyo: @ mrusyaidi1997 kanye @alexsalvinews